क्रिकेट रंगशालाको डीपीआर बन्यो, धुर्मसले मागे ‘अन्तिम सहयोग’ - Icatch Khabar
६ कात्तिक, चितवन । धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा बनाउने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । तोकिएको समयभन्दा झण्डै दुई महिना ढिला गरी रंगशालाको डीपीआर तयार भएको हो ।
महानगरपालिकाका इन्जिनियरहरुले पनि हेर्नुहुन्छ । महानगरपालिकाबाट स्वीकृत गराउँछौं । त्यसअघि नै मैदानको ले-आउटको काम सुरु भैसकेको हुन्छ ।
पक्कै पनि हामीले जनता र सरकारको सहयोगमा यो रंगशाला बनाउने भनेका छौं । हामी त माध्यम मात्रै हौं । क्रिकेट नेपालको राष्ट्रिय गौरवको विषय हो । यो तीन करोड नेपालीको साझा अभियान हो । यो अभियानमा हरेक नेपालीको साथ आवश्यक पर्छजस्तो लाग्छ । थोपा-थोपा मिलेर सागर बन्छ । सबैभन्दा पनि चितवन जिल्लाबाट सहयोग हुनुपर्छ । चितवन जाग्नुपर्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस 'फ्रान्सेली खेलाडी महँगो'
हरेक जिल्लामा जिल्लास्तरमा सहयोग समिति गठन हुन्छ । क्रिकेट एसोसियन (क्यान)मा पनि नयाँ पदाधिकारीहरु आउनुभएको छ । उहाँहरुसँग पनि भेट भएको छ । कुराकानी भयो । उहाँहरुले पनि साथ दिनुहुन्छ ।
हो, पक्कै पनि सरकारको काम हो । हामीले हैन भनेका छैनौं । सरकारले बनाउन लागेका परियोजनाहरुको हालत दयनीय छ । मूलपानी क्रिकेट मैदान बन्न थालेको १७ वर्ष भयो अझै खेल्नयोग्य भएन । कहिलेसम्म कुर्ने ?
हेर्नुस् हाम्रो बिडम्वना ! सरकारले एउटा पनि खेल मैदान बनाउन सकेको छैन । त्यसैले यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा सहयोग गर्न कोही पनि नछुटौं भन्न चाहन्छु । रंगशाला बन्दै गर्दा मेरो व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्ने हैन, यो देशको सम्पत्ति हो ।(अन्लाईन खबर )
अघिल्लो लेखमाकफी भेटमा गायिका सुनिती
अर्को लेखमाअमेरिकाले भन्यो-नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्यो